14 | January | 2008 | Layma's World
မွေးနေ့ပါရှင်…( 28 ပြည့်တာ … 28 )
Posted on January 14, 2008 by layma
(လှတယ်နော် … ကြောင်ကုန်ပဏီက လေ)
ခုတလော ခဏခဏ နေမကောင်းဖြစ်တယ် …။
ဗေဒင်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ သူများမွေးနေ့တွေ လှည့် … စားထားပြီး ကိုယ့်မွေးနေ့မှာ ဘော်ဒါတွေကို မကျွေးလို့တဲ့…။
တကယ်တော့ မွေးနေ့လုပ်မလို့ပါဘဲ … လက်ဆောင်လိုချင်လို့ .. အဲ…ဟုတ်ပါဝူး… ဘော်ဒါတွေကို မုန့်ကျွေးချင်လို့ပါ…။
မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာ မအားမလပ်ဖြစ်သွားလို့ တိတ်တိတ်လေးပဲနေလိုက်တာ … ။
ခုကျွေးပြီနော် .. ညွှန်းထားတဲ့နေရာတွေမှာ သွားစားကြနော်…။
လေးမ အသက် တစ်နှစ် ထပ်ကြီးသွားတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး ၀ါး သွားကြနော်…။
အဟင့်..နောက်ဆို ၂၉ လို့ပြောရတော့မယ်… ၀မ်းနည်းလိုက်တာ…. ။
ကောင်းကင်ကြီးကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ Anti Wrinkle eye gel နဲ့ cream တွေ ပူဆာထားတာ ခုထိ ၀ယ်ပေးသေးဘူး…။ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်…။
ထမင်းနဲ့ ဟင်းစားမယ့်သူတွေက မလုလုဆီသွား…။ထိုင်းစာ စားချင်ရင် မောင်မျိုး ဆီကို သွား…။အရုပ်ထမင်း စားချင်ရင် မိုးချစ်သူလေး အိမ်မှာ ရှာ…။
ဘီယာ သောက်မယ့်သူတွေက ကိုသန့် မွေးနေ့မှာ သွားဆွဲ…။
လက်ဆောင်ပေးမယ့်သူတွေက လေးမ အိမ်မှာ ပေးခဲ့ပေါ့… ရှင်…။ ။
winkabar, on January 14th, 2008 at 7:44 pm Said:
မိုက်လှချည်လားအစ်မရဲ့။ ဘာမှမကုန်ပဲနဲ့မွေးနေ့လုပ်လိုက်တာ။ တော်တယ်အစ်မရယ်။ Happy Birthday ပါ။ လက်ဆောင်ကတော့ပြန်လာမှပဲပေးတော့မယ်နော်။
jerry, on January 14th, 2008 at 8:52 pm Said:
happy birthday ဗျို့ ။။။
ဦးကောင်းကင်ကြီးကို ဗိုက်ခေါက်သာ ဆွဲလိမ်ဗျာ ။ အဟား ဟား ။
ညွှန်းထားတဲ့ အထဲမတော့ ကိုမောင်မျိုးရဲ့ ထိုင်းစာ ရှုးရှုးရှဲရှဲ ဆွဲပြီး ကိုသန့်ဆီမှာ ဘီယာသွားသောက်လိုက်တယ် ။ ကောင်းပါ့ ။
လက်ဆောင်က ကြိုမသိလို့ ပါမလာဘူး ။ ကြိုမပြောတော့ သိဘူးလေ နော့။ နောက်နှစ်မှဗျို့ ။
မောင်မျိုး, on January 14th, 2008 at 8:57 pm Said:
မွေးနေ့ ရှင်လူလည်ကြီးဗျ ဘာမှလဲမကျွေးပဲနဲ့ 
ဒါနဲ့မွေးနေ့ ကိတ်က လှလိုက်တာ ဘူပေးတာလဲဗျ
ကြောင်ကုန်ပဏီက ဆိုတော့ ရဲလေး နဲ့ တူတဲ့ ဟိုကောင်လေးပဲဖြစ်မယ်..ဟီးဟီးး
မျှားပြာ, on January 15th, 2008 at 1:57 am Said:
အလဲ့ အသက်တွေတောင် ကြီးကုန်ပါရော့လား … မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်များစွာတိုင် ကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ ဘ၀ကို အဆင်ပြေပြေ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ။ အရာရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်း အောင်မြင် ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေ။
ကိုအတာ, on January 15th, 2008 at 5:23 am Said:
Happy Birthday ပါခင်ဗျား။ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို ညွန်ပြထားသော နေရာများတွင် အ၀စားပြီး လက်ဆောင်အတွက် ဒီရာမှ နှစ်သက်ရာ ၀က်ဝံရုပ်လေးများကို ယူနိုင်ရန် ပေးခဲ့တယ်။ http://emotionalcorner.blogspot.com/2007/01/blog-post_07.html
tzm, on January 15th, 2008 at 9:13 am Said:
ဘယ်နေ့က မွေးနေ့လဲ… မပြောသွားဘူး…။ဟက်ပီးဘက်ဒေးပါ… မမလေးရေ…။
nu-san, on January 15th, 2008 at 9:25 am Said:
အဟက်… ဒီလို မွေးနေ့ရှင်မျိုး ဒီတစ်ခါပဲ ကြုံဖူးသေးတယ်.. တော်လိုက်တဲ့လေးမ…. Happy Birthday!!!
လေးမရဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ.. ကောင်းကင်ကြီးဆီက ပူစာထားတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်တွေလည်း အမြန်ရပါစေ.. မုန့်အရင်သွားစားလိုက် အုံးမယ်နော်.. နောက်မှ လက်ဆောင်ယူသိလား..
nyeinnyo, on January 15th, 2008 at 12:33 pm Said:
အမြဲ့တမ်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေဗျာ။ ကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ ဘ၀တစ်လျှောက်ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။ စိတ်၏ချမ်းသားခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေ ။
လောလောဆယ် ကိုကောင်းကင်ကြီးကို ပူဆာထားတဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းလေးတွေလည်း အမြန်ဆုံးရပါစေဗျာ
nyo, on January 15th, 2008 at 1:36 pm Said:
မလေးရေ.. Happy Birthday and Better Year to you… ပါနော်.. သူများလည်း ၂၉ လို့ပြောနေရပြီဆိုတော့ anti wrinkle and anti aging ၀ယ်လိမ်းရတော့မယ်.. ပူဆာရမယ့်သူမရှိတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ၀ယ်လိမ်းရမှာပေါ့ .. အားငယ်လိုက်တာနော်..
ဆုမွန်, on January 15th, 2008 at 2:25 pm Said:
ချစ်မလေးမရဲ့ ၂၉ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာ တိုင်အောင် ချုစ်သူခင်သူ များနဲ့ မကွဲမကွာနေ ရပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ ရှိနိုင်ပါစေ။
အကိုကောင်းကင်ကြီးနဲ့လည်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မိသားစုလေးမှာ သားသား မီးမီးလေးတွေနဲ့ ဘ၀ထက်ဆုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေနော်Dear sis……..pls forgive me for my belatedbday wish!!!!
မောင်နိုင်, on January 15th, 2008 at 2:49 pm Said:
မွေးနေ့ ကိတ်က အရမ်းလှတယ်ဗျာ …ဘယ်သူပေးတာလဲ
ကျွန်တော် ညီလေး ..ရဲလေးနဲ့ တူတဲ့ ကောင်လေးပေးတာလား
ကျွန်တော် နည်းနည်း စားသွားတယ် နော် …..မလေးမ
မွေးနေ့ မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ ခင်ဗျာ …………….(လေးမတို့ ရွာ )
သဇင်ဏီ, on January 15th, 2008 at 3:10 pm Said:
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပါစေ..
ဒီထက် ဒီထက်ပိုပြီး လှနိုင်ပါစေ
သွပ်သွပ်ကြိုက်သော အရေးအသားတွေလဲ ဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေလို့လိူက်လိူက်လှဲလှဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်..
kthuyien, on January 15th, 2008 at 8:58 pm Said:
မုန့်တွေ ကျန်သေးလား ဗျို့။
နောင်အနှစ် ရာထောင်တိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ပါစေ …. ဗျာ
Tay Zar, on January 16th, 2008 at 9:58 am Said:
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ အန်တီ =) သား မုန့်လာစားသွားတယ် ဟေ့ ဟေ့
ချစ်လေပြေ, on January 16th, 2008 at 7:22 pm Said:
မွေးနေ့ ဆုတောင်း အတွက် နောက်မကျသေးပါဘူးနော်၊ မွေးနေ့တောင် နောက်ကျမှ လုပ်တာပဲ ဟာ၊ လေးမလေး ၂၈နှစ် ပြည့် မွေးနေ့ မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ တိုင် သူမ၏ ကောင်းကင်နဲ့ ပျော်ပျော် ရွင်ရွင် နောင်လာ လတ္တံသော ကောင်းကင်လေး များစွာနဲ့ အသက်ထက်ဆုံး နေသွားနိုင် ပါစေလို့ ၊ ပျော်ရွင် ချမ်းမြေ့ဖွယ်ကောင်းသော အသိုက်အမြုံလေးကို အမြန်ဆုံး ပိုင်ဆိုင် ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်နော်၊ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ပါတိတ် တစ်ထည် မမလေပြေ ဘလော့ဂ်မှာ လာယူနော် သိလား။
ဂျေ, on January 17th, 2008 at 2:37 am Said:
စိန်အိတ်လိုချင်ရင် ဂျေ့ဂျေ့ဆီလာ… ညီမလေး ဟက်ပီးဘတ်ဒေး
MyaYwetWai, on January 17th, 2008 at 10:27 am Said:
အိမ်အသစ်ကို လိုက်လာတာ ကိတ်မုန့်ကြီးနဲ့ တိုးနေပါ့လား။
မလေးမရဲ့ ကောင်းကင်ကြီးနဲ့အတူ အဆုံးအစမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ အမြဲရရှိပါစေ။
မွန်, on January 17th, 2008 at 2:46 pm Said:
စိုးထက် – Soe Htet !, on January 18th, 2008 at 8:33 am Said:
ံHappiest Birthday !!! နောက်ကျ သွားပါတယ် … ပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု အကြီးကြီး ရပါစေ
ဇီးကွက်, on January 18th, 2008 at 9:19 am Said:
အစ်မရေ နောက်ကျသွားတယ်နော်။ ဆောဒီး။ အရင်အိမ်ကို ရောက်ရောက်သွားလို့။ အခုတော့ ဒီအိမ်လိပ်စာကို ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ။
လိုအင်ဆန္ဒတွေ တစ်လုံး တစ်ဝတည်း ပြည့်ဝနိုင်ပါစေ။
sparrow, on January 19th, 2008 at 2:53 pm Said:
အမိဝမ်းကနေကျွတ်တဲ့နေ့ကို အစွဲပြုပြီး ကျင်းပတဲ့ဒီနေ့လိုနေ့လေးကနေ နောင်ဒီလိုနေ့လေးပေါင်းများစွာကို..သောကဟူသမျှဘာမှမရှိပဲနဲ့ကုန်လွန်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ….
22. ရွှန်းမီ Says:
အိုး.. နောက်တောင်ကျနေပါလား.. ဟဲဟဲ .. မကုန်နိုင်တဲ့ အရာတွေမို့ မျက်လုံးနဲ့ လိုက်စားသွားပါတယ်..
မွေးနေ့ကိတ်က အရမ်းလှပါလား ..
မလေးမလဲ လှလှပပ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဦးကောင်းကင် ကြီးနဲ့ ချစ်ချစ်ခင်ခင် အသက်ထက်ဆုံး ရှိပါစေ လို့ .. 23. မင်းကျန်စစ် Says:
အရမ်း နောက်ကျနေပြီဆိုတာ သိပေမယ့် ဆုတောင်းပေးချင်လို့ဗျို့။ စာမေးပွဲကြောင်း တကယ်ကို မအားမနေ ရှုပ်နေမိတယ်။ အသစ် မရေးမိသလို လိုက်လဲ မလည်ဖြစ်ဘူးဗျာ။ လက်ဆောင်ကိုတော့ software တွေ ပေးလိုက်မယ်။ လာယူပြီးသားရော မယူရသေးတဲ့ အသစ်တွေရောကို လက်ဆောင်မှတ်နော် နောင် မွေးနေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ပါစေ အမရေ။
24. tu tu Says:
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နေ့ရက်များကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ…။ တကယ်တော့ နောက်မကျပါဘူးနော်။ felling(1)မှာကတည်းက ကြိုပြီးဆုတောင်းပေးထားတာနော်။
Filed under: Personal |	26 Comments »